“ကလေးလေး၏ (၂၃) နှစ်မြောက် မွေးနေ့..”
သမီးရထားတဲ့ ဆုလာဘ်တွေပေါ့...ကွယ်...။ ။
မဉ္ဇူသကတစ်ပွင့် လှပစွာပွင့်ခဲ့ ။
ကလေးလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း (ကောင်းကင်ကို)
ပန်းတွေပိုပွင့်မယ့် ဥယျာဉ်လေး တစ်ခုဖြစ်ပါစေ။
အစွမ်းထက်ဆုံး အားဆေးတွေ ကလေးလေးကို ကျွေးဖို့ 
ပုလဲတွေသီ နေကြပြီ ကလေးလေး။
ကလေးလေးရဲ့ ဒုက္ခတွေကို အဝေးမျှောပစ်ဖို့ 
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ပို့ သတဲ့ မေတ္တာတွေစုပေါင်း
အိမ်အပြန် (ဖိုးမောင် - Happy Cloud)
မိုးရွာချိန်မှာ လိုအပ်တာက ခိုလှုံရာတစ်ခု....
၀ုန်းကနဲ ပေါက်ကွဲမှ ရမယ်ဆိုရင်...
ဖိုးမောင် (Happy Cloud)
ပွင့်ဖတ် နံပါတ် ၂၃ (အိပ်မက်ရှင်)
နေခြည်တွေ ဖြာလို့ ... လင်းလို့
လေပြေ အသွေးမှာ နွဲ့ရမ်း ...
မာလာပန်းဥယျာဉ် ... ။
အဖြူ အနီ ...
အညို အ၀ါနဲ့ အပြာစွက်
ရောင်စုံတွေ ပုံလို့ ထပ်ခဲ့ ...
အပွင့် အခက် ...
အလှချင်း ပြိုင်နေပုံများ ... ။
ပန်းတစ်ပွင့်လည်း ရှိနေတယ် ... ။
ငုံဖူးရတဲ့ ဘ၀ရှိတယ် ...
ရေစင်ဆမ်းတဲ့ ဘ၀ရှိတယ် ...
ရှင်းသက်သုတ်သင်ရတဲ့ ဘ၀ရှိတယ် ...
လိုအပ်ချက် ရှာမရအောင် လှဖို့
ပွင့်ချပ်တွေ တစ်ဖတ်ပြီး တစ်ဖတ်
အသာအယာပဲ လှစ်ဟကာ ကြွခဲ့ ...
သိမ်မွေ့နုညံ့စွာလည်း လှခဲ့ ... ။
ပန်းပွင့်လေးရဲ့ အဆင်းက ...
မြင်သူ ကြည်နူးစေဖို့ ...
မြင်သူ လန်းဆန်းစေဖို့ ...
နုညံ့သွားအောင် ဖမ်းစားလို့ ... ။
နံပါတ် ၂၃ ပွင့်ချပ်အကြွ
မာန်တင့်ကာ လှနေဖို့ အသင့် ... ။ ။
(သုတ၊ ရသနဲ့ အနုပညာပန်းပွင့်တွေ စုံညီပွင့်ဖူးဝေဖြာနေတဲ့ ဘလောက်ဂါ ရပ်ဝှမ်း ပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲက သိပ်ကို လှပတင့်ဆန်း နေတဲ့ ပန်းပွင့်ကလေးဖြစ်တဲ့ တူမငယ် ကလေးလေးရဲ့ ပွင့်ချပ်လေး ၂၃ ချပ်မြောက်၊ ၂၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက် ဦးငယ်အိပ်မက်ရှင်မှ မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ် အမှတ်တရပါ ..)
မဆိုသာ ဒီဝဋ်ကြွေးနယ်ကို လွန်မြောက်ရင်
ငိုဖော်ငိုဖက်၊ အားပေးဖော် အားပေးဖက်ဖြစ်သည့် ချစ်သောမမ ကလေးလေး၏ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော နှလုံးသားတစ်စုံကို ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ.. ဘဝအဆက်ဆက် မမနဲ့ကျန်ရှိတဲ့ ရေစက်တွေ မကုန်ဆုံးပါရစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ...
ခွန်အားဖြည့် ကလေးလေး.. (ဆောင်းယွန်းလ)
၂၃ဆိုတာ ဘာကြာသေးတာမှတ်လို့လဲ ကလေးရေ...
စိတ်တို့ရဲ့ ခွန်အားကို စားသုံး
ရဲရင့် ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးကိုဓားလိုသွေး
တရားဆိုတဲ့ အသိကို အားတခုအဖြစ် မွေးနိူင်စေပြီး
အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ မြှားတွေ ပစ်ခွင်းနိူင်ပါစေ ကလေးရေ...
ကောင်းကင်ပြာအောက်က ကလေးလေး.. (မိုးကြယ်)
ခလေးလေးက အဖြူရောင်စံပယ်ပန်းလေးပေါ့ ။
မွှေးရနံ့သင်းထုံထုံလေးတွေနဲ့ ၀န်းကျင်ကို အပျော်တွေကူးစက်စေတယ်
မင်းက ကောင်းကင်က ကြယ်ကလေးတစ်လုံးဆိုရင်
အဖြူရောင် မေတ္တာ အကိုင်းခက်တွေနဲ့ လေလှိုင်းဘလော့သစ်ပင်လေးမှာခိုးနားပါ
အကြင်နာတရားတွေရှိတယ် ဖေးမမယ့် လက်တွေရှိတယ်
ခလေးလေး ချစ်တဲ့ ဦးနော် နဲ့ မေမေခင် ရှိတယ်
ဘာမှမတော်တဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေရှိတယ်
အားငယ်တဲ့ အခါ စကားတွေအများကြီးပြောပစ်လိုက်ပါ
ပျော်နေတဲ့ အခါ ဝေမျှလိုက်
လောကမှ ငါတစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့ အတွေးမ၀င်မိစေလိုက်နဲ့နော့်
ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ပျော်စရာတွေနဲ့ အပြည့်ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ့
မွေးနေ့မှစ ရှေ့ဆက်နေရက်တွေ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ ညီမလေးရေ့
Happy Birthday ဗျ ။
ဘ၀ အမော အတွေးတွေနဲ့
မှိုင်တွေ မငေးနဲ့ က-ကလေးလေး။
ပျော်ရွှင်မှု၊ အားမာန် နဲ့ ဘ၀ပင်လယ်ကို
ချစ်စရာ စကား မပီကလာနဲ့
အမြဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ ကစားနေနိုင်ပါစေ က-ကလေးလေး။
မွေးနေ့မှ စလို့ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ
မေမေခင် ဦးနော်နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အတူနေနိုင်ပါစေ က-ကလေးလေး။
ညီမလေး သို့.... (မမသီရိ)
ပန်း ခင်း ချင် ခင်း..
တလှမ်းချင်း ဆက်လျှောက် ရမှာ .. ဘ၀ ဆို တာပါ...
သီချင်းလေးတွေ ဆို ခါဆို..
ငိုတဲ့ အခါ ငို လိုက်...
ရေစီးသာတဲ့ အခိုက် ..ပျော်..
ရေဆန်ကို လဲ ရဲ ရဲ ကူး..
ကျူးကျော်လာတဲ့ .. မွေးနေ့တွေ မှာ
ပျော်ရွှင်ခြင်း အဖြာဖြာ နဲ့
ချမ်းမြေ့ ခြင်း မင်္ဂလာများ...
ချစ်သော .. ညီမလေး ရေ......။
သမီးနှလုံးလေး တစ်ချက်ခုန်လိုက်တိုင်း နေ့သစ်အတွက် တောက်ပမယ့်
အလင်းလေးက ပြေးပြီး ပွေ့ဖက်ချင်လွန်းလို့ပေါ့....
သမီးဝင်သက်လေငွေ့ငွေ့လေး တစ်မျှင်ဟာ နေ့သစ်ကိုကြိုဖို့
သမီးထွက်သက်လေးကို မှုတ်အထုတ်မှာ ခြေလှမ်းသစ်အတွက်
နေ့အဟောင်းလေးက လည်တွေတောင် စင်းပေးလို့နေပြီ...
သမီးမျက်ဝန်းက မျက်တောင်လေးအခတ်ဟာ ပန်းလေးတွေကို
ငေးလို့.. ငှက်လေးတွေကို မော့ကြည့်ဖို့လေ သမီးရယ်...
သမီးဆံနွယ်လေးတွေ သပ်အတင်မှာ သမီးဆီ သယ်ဆောင်
သမီးလက်ကလေး အလွှဲမှာ ပန်းလေးတွေက အလုအယက်
သမီးခေါင်းလေး အဆတ်မှာ ငှက်ကလေးတွေက တေးဆိုချင်လွန်းလို့
စောင့်နေရင်း ငိုမဲ့မဲ့လေးတွေတောင် ဖြစ်နေကြပြီ...
သမီးခြေလှမ်းလေး ဖွဖွအချမှာ စမ်းချောင်းလေးက ရေအေးလေးတွေ
သမီးရယ်သံလေးတစ်စမှာ ကဗျာလှလှလေးတွေက ခုန်ပေါက်ပြီး
ကြိုလင့်နေတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ လောကအိမ်ထဲမှာ သမီးကိုချစ်တဲ့
ဟော... ကြည့်စမ်း..!! နေ့သစ်ရဲ့ ရောင်ချည်လေးတွေတောင်
ကဲ... ချစ်စရာ မေ့ သမီး အိတ်ပုတ်မလေးရယ် မေ Birthday kiss လေး
ပေးမလို့ မြန်မြန် ထ... ပါတော့...!!
မမကလေးလေးအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်.. (ကလေးငယ်လေး)
မမကလေးလေးအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့စ်လေး သမီးရဲ့ဘလော့ မှာ တင်ထားပါတယ်ရှင်..
“အဖြူရောင် အိပ်မက်” (မိုးမောင် - Happy Cloud)
ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးသည် ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် အဖြူရောင်ချည်းသက်သက် ဖြစ်နေသည်။ ဒီနေရာမှာ ကောင်းကင်ကလဲ အဖြူ၊ မြေပြင်ကလဲ အဖြူ၊ သစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကလဲ အဖြူတွေပဲ၊ ပန်းကလေးတွေဆိုရင် ဖြူအိပြီး လန်းဆန်းနေတာ။ ဒီနေရာမှာ အိုမင်းနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ လမ်းမကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဖြူစင်ခြင်းကမ္ဘာမှာ ရှင်သန်နေရတာ ပျော်မွေ့နေဟန် ရှိကြတယ်။ သာယာလိုက်တာ.. အေးချမ်းလိုက်တာ.. တိုက်ခတ်နေတဲ့ လေကိုက သန့်စင်ပြီး လတ်ဆတ်လို့ပေါ့။ အဖြုရောင် အတိပြီးတဲ့ နေမင်းကလည်း ပူလောင်မှုကို မပေးပဲ နွေးထွေးပြီး လန်းဆန်းစေတယ်။
ကျွန်နဲ့ သခင်ဝါဒဆန်တဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ မထွန်းကားဘူး..
ငါဆိုတဲ့ စိတ်တွေကတော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် သင့်တင့်မျှတရုံထက် မပိုကြဘူး..
ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ လူသားအားလုံးဟာ အဖြူရောင်ချည်ထည်တွေ ၀တ်ဆင်ထားကြတဲ့ ကလေးငယ်တွေပါ့လား...
သူတို့တတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကစားနေကြရင်း အော်ဟစ်နေကြပုံက ဘေးကလူ ကြည့်ရင်တောင် အပျော်တွေကူးစက်ပြီး အော်ဟစ်ချင်စိတ် ပေါက်လာစေတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေဟာဆိုရင် တကယ့်ကို ကြည်စင်ပြီး အရည်လဲ့နေတဲ့ စိန်တုံးလေးတွေလိုပဲ။ အသားကလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း ၀င်းဖန့်ပြီး စိုလက်နေတဲ့ အသွင်နဲ့ နုနုနယ်နယ် ချစ်စဖွယ်လေးတွေ..။
သူတို့ကို ဘယ်သူစုစည်းပြီး ဒီနေရာကို ပို့ထားတာပါလိမ့်....
အားလုံးဟာ အရွယ်မတိမ်းမယိမ်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလေးတွေ..။ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ... ကြည့်ရတာ မျက်စိထဲရော နှလုံးသားထဲမှာပါ ငြိမ်းချမ်းလွန်းလို့.. သူတို့လေးတွေ ကစားနေတဲ့နေရာရဲ့ မလှမ်းမကမ်း ခုံတန်းလေးက ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်။
ထိုအခိုက်... ကစားကွင်းရဲ့ ထောင့်တနေရာက စကားပြောသံ သဲ့သဲ့ ကြားရတယ်...
“ကျုပ်တို့ ဖြူစင်ခြင်းဂေဟာဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းတွေ အတော်လေးစုံလင်နေပြီဗျ”
“အင်း... ဒါဆို ကလေးတွေအတွက် ကျုပ်တို့ မနက်ဖြန်ပဲ စပြီးဆောက်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ”...
အဖြူရောင် ၀တ်ရုံကိုယ်စီနဲ့ အဖိုးအိုနှစ်ယောက်..
သူတို့ဟာ အိုမင်းနေကြပေမယ့် မျက်လုံးမျက်ဖန်တွေဟာ ထက်မြက်ပြီး ငြိမ်းအေးတဲ့ အသွင် ဆောင်နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ စကားကြောင့် နဂိုကမှ ကလေးတွေအပေါ် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အခံနဲ့ ဖြူစင်ခြင်းဂေဟာ ဆောက်လုပ်ရာမှာ ၀ိုင်းဝန်းကူညီချင်နေမိတယ်။ ဒါနဲ့...
“ဦးရီးတို့ခင်ဗျာ... ဖြူစင်ခြင်းဂေဟာ ဆောက်လုပ်ရာမှာ.. ကျနော်လည်း ပါဝင်ကူညီပါရစေလား ခင်ဗျာ” လို့ ခွင့်ပန်လိုက်တယ်။
“ဟေ.. မင်းက ကူညီချင်တာလား”
“ကျနော့် အနေနဲ့ ဉာဏ်အားမကူနိုင်တောင် လက်ရုံးအားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကူညီပါရစေဗျာ”
“ဒါထက်.. တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို အရင်ပြောပြရအုံးမယ်”
“အဲဒါက...တကယ့်ကို ဖြူစင်လွန်းတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘ၀တသက်တာအတွက်.. စစ်မှန်ပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လောကဓမ္မတွေကို တို့တတွေ ချမှတ်လမ်းပြ ပေးဖို့ပါပဲ”
“ဒီတော့.. တို့နှစ်ယောက်က ဒီလိုစီစဉ်တယ်၊ သူတို့လေးတွေရဲ့ အိပ်စက်ချိန်မှာ အိပ်မက်တွေ အဖြစ်နဲ့ ညစဉ် လောကဓမ္မတွေကို ပို့ချသင်ကြားပေးမယ်.. အဲဒီအချိန်တွေမှာ သူတို့တွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ လူကြီးတွေနဲ့တန်းတူ လေ့လာမှတ်သားနိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်မျိုး ဖြစ်နေစေဖို့.. ဟောဒီက ငါ့သူငယ်ချင်းကြီး ကိုယ်တိုင် သူတတ်စွမ်းတဲ့ ပညာရပ်နဲ့ အကျိုးပြုစီစဉ်ထားတယ်”
“အခုလည်း သူတို့တွေရဲ့ အိပ်စက်ချိန်လေ.. သူတို့ရဲ့အိပ်စက်ချိန်မှာ အိပ်မက်အဖြစ်နဲ့ ဒီနေရာကို ညစဉ်ညတိုင်း ခေါ်ထားတာပေါ့”
“ဖြူစစ်ခြင်းဂေဟာဆောက်ဖို့ တတ်ကျွမ်းရမယ့်ပညာထက်.. အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကသာ အရေးကြီးတာပါ..”
(၁) လောကရဲ့ရိုးသားခြင်းတွေ ဖော်ထုတ်ပြီး အကျင့်သီလကို ဖြူစင်ဖို့..
(၂) နုနယ်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့စိတ်မှာ အကြောက်တရားကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပြီး လောကရဲ့မမြဲတဲ့ အနိစ္စသဘောကို ရဲရင့်စွာ လက်ခံရဲဖို့..
(၃) မိဘတို့အပေါ် ထာဝရရိုသေကိုင်းရှိုင်းပြီး သတ္တ၀ါတိုင်းအပေါ် မေတ္တာတရားနှင့် ယှဉ်သော ကိုယ်ချင်းစာတရား ပွားများတတ်စေဖို့..
(၄) အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ စိတ်အလျဉ်တွေရဲ့ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘောကို တဖြည်းဖြည်း သတိကပ် ဆင်ခြင်လာနိုင်စေဖို့..
(၅) အကျင့်သီလပိုင်း အနေနဲ့က လောကမှာ ထွန်းကားနေတဲ့ ဘာသာတရားကြီး တွေထဲက တူညီတဲ့ အကျင့်သီလ စောင့်ထိန်းမှုတွေကို အရင်သင်ကြား ပေးရမှာပေါ့။
“အဲဒီအခါ သူတို့တွေဟာ ကိုယ်အမူအရာ နှုတ်အမူအရာ အားလုံးရဲ့ လှုပ်ရှားပြုမူမှုတွေကို အကျင့်သီလနဲ့ယှဉ်ကာ ဆင်ခြင်မိလာပြီး လောကကျင့်ဝတ်တွေကို စောင့်စည်းနိုင်တဲ့ လူသားတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဖြူစင်ခြင်းဂေဟာရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဟာ သီလဆိုတဲ့ အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး အတတ်ပေါ့။ သီလကို အခြေပြုထားတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးအတတ်နဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဖြူစင်မှုကို လူကြီးဖြစ်တဲ့အထိ ထိန်းသိမ်း သွားနိုင်ရမယ်။ ဒါမှ ကမ္ဘာလောကကြီးဟာ မကောင်းမှုတွေ လျော့ပါးလာမှာပေါ့”
အဖိုးအိုနှစ်ယောက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို နားထောင်ရင်း ကလေးငယ်လေးတွေ အတွက် ကြည်နူးဝမ်းမြောက် မှုနဲ့အတူ ကြက်သီးမွှေးညင်းများပင် ထမိတယ်။ ကျနော်လည်း ဒီိလိုနေရာမျိုးမှာ ကလေးငယ်တစ်ဦးအဖြစ် ရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့ ချင်လိုက်တာ။ အခုတော့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ အတိပြီးတဲ့ စိတ်ကို မောင်းနှင်လို့ လူ့လောကကြီးမှာ အမှိုက်အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တွေ အတော်ကျော်လာခဲ့ရပြီ။
ထိုသို့ တွေးမိနေစဉ် အခိုက်... ဒုတိယအဖိုးအိုက ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာဖြင့်...
“ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် တွေးတော ပူပန်မနေပါနဲ့ ကွာ”
“ဗျာ.. အဖိုးက ကျနော်တွေးနေတာကို သိတယ်ပေါ့”
“ဟား.ဟား. ဒါကထားပါကွာ.. အခု အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးကြဖို့ပဲ စဉ်းစားပါတော့”
“အေး.. တခါတည်းလည်း မင်းကိုပြောရအုံးမယ်.. တို့အခု ဖြူစင်ခြင်းဂေဟာ ဆောက်လုပ်ဖို့ ပထမဆုံးလုပ်သား အဖြစ် မင်းကိုရွေးချယ်လို့ အိပ်မက်လူသား အဖြစ်နဲ့ ဒီနေရာကို ခေါ်လိုက်တာပါ”
“ဗျာ... ဟုတ်လား ၀မ်းသာလိုက်တာ”
“နောက်နေ့တွေကစပြီး တို့နဲ့အတူ လုပ်အားပေးပေါ့ကွာ..နော်”
“စိတ်ချပါ အဖိုးတို့ရယ် ကျနော့်ကိုသာ ခေါ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့”
အဖိုးအိုနှစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ကြည်လင်သောအပြုံးနဲ့ ကြည့်ပြီး..
“အေးအခုတော့ မင်းအိမ်ပြန်လိုက်ပါအုံး၊ နောက်ရက်တွေကစပြီး တစ်လှေတည်းစီးပြီး တစ်ခရီးတည်း သွားကြအုံးစို့ မောင်ရင်ရေ”
ပထမအဖိုးအိုက ကျနော်ပုခုံးကို အသာအယာ လှမ်းပုတ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ.. အေးမြတဲ့ ဓာတ်လှိုင်းတစ်ခု ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို စီးဝင်လာသလို ခံစားမိလိုက်တယ်။ နောက်တော့.. အဖိုးအိုတို့၏ နွေးထွေးတဲ့ နှုတ်ဆက်အပြုံး... ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စွာရယ်မော မြူးထူးနေတဲ့ အသံလေးတွေ.. အဖြူရောင်ငှက်ကလေးတွေရဲ့ တေးသီနေတဲ့ အသံတွေ.. အို... ပြောနေရင်း.. အဖြူရောင် ယုန်ကလေးတွေ ကျနော့်ရှေ့က ဖြတ်ပြေးသွားကြတယ်ဗျာ...
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ အားလုံးကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်နေမိတယ်။
ဒီနေ့ကစပြီး ကျနော်ဟာ ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက် အကျိုးပြုဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီလေ... ကျနော့်ရဲ့ အိမ်အပြန်ခရီးက ပျော်ရွှင်မှုတွေအပြင် ၀မ်းမြောက်ပီတိ တွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ချစ်ခင်ရတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ကျနော့်အရင်းနှီးဆုံးသူရဲ့ လက်တွေကို တပေါင်းတည်း ဆုပ်ကိုင်လို့ သာယာတဲ့ နေ့သစ်ပေါင်း မြောက်များစွာကို ဖန်ဆင်းခွင့် ရအုံးမယ်လေ....
“ဟေ့ရောင်... နေဖင်ထိုးနေပြီ ထတော့ဟ”
“နှိုးစက်က ဒီလောက်အော်နေတာတောင် မထနိုင်ဘူးး.. ပြီးတော့ မျက်နှာကြီးကလည်း အိပ်ယာနိုးတာတောင် ပြုံးရွှင်လို့.. အရင်နေ့တွေကဆို စူပုတ်ပြီး အိပ်ယာထတဲ့ကောင်... ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ အ်ိပ်မက်နေလဲ မသိဘူး”
အခန်းဖော် သူငယ်ချင်းရဲ့ အသံကို ကြားတော့မှ...
((ဟိုက်)) အလုပ်နောက်ကျပြန်ပြီ... “အေးဟေ့... ထပြီဟ.. ထပြီ”
အိပ်ယာကို အသည်းအသန် သိမ်းရင်း နောက်နေ့ညတွေတော့ အစောကြီးအိပ်တော့မည်ဟု တွေးလို့သာ ပျော်ရွှင်နေတော့လေသည်။
လောကရဲ့ အနားသတ်မျဉ်းတွေဖြစ်တဲ့ အကျင့်သီလတွေ..
ရိုးသားပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကင်းတဲ့ လောကပါလတရားတွေ..
တနေ့တော့ လူ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ထွန်းကားလာအုံးမယ်လို့ မျှော်လင့် စိတ်ကူးရင်း......
ကလေးလေး ကျန်းမာလန်းဆန်းလို့ ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးပဲ ခင်ရာဆွေမျိုးရင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဦးနော်၊ မငယ်ကြီးတို့နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲ၍ ပြုံးပျော်ကြည်နူးနေနိုင်ပါစေဗျာ.....
ဦးနော်က သမီးအတွက် ဝမ်းသာခြင်းတွေ.. ကျန်းမာခြင်းတွေ.. ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ အများကြီး.. အများကြီး ယူလာတယ်နော်.. သမီးပျော်ရွှင်နေတာကို အမြဲမြင်နေချင်တယ်.. သမီးလေး ကျန်းမာနေတာကို တွေ့ချင်တယ်.. ဒါဟာ ဦးနော်ရဲ့ ရင်ထဲကစကား.. အခု သမီးကြည့်လိုက်စမ်း သမီးကို ချစ်တဲ့.. ခင်တဲ့ သူတွေ ဘယ်လောက်များတယ် ဆိုတာ.. ဒါဟာ တကယ်တော့ အံ့သြစရာ တစ်ခုပဲ.. သူတို့တွေ သမီးအနားမှာ မရှိကြဘူးနော်.. သမီးကိုလည်း မတွေ့ဖူးကြဘူး.. ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့စိတ်တွေက သမီးကို သိနေ ခင်နေကြတယ်.. ချစ်နေကြတယ်.. သူတို့တွေ သမီးရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးကို စိတ်တွေနဲ့ တက်ရောက်လာကြတယ်.. သမီးဧည့်ခံတာတွေကို စိတ်တွေနဲ့ သုံးဆောင်သွားကြတယ်.. သူတို့ရဲ့ ကြည်နူးမှုတွေ.. သမီးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဒီနေရာမှ ထပ်တူကျနေတယ်.. သမီးရေ.. ဒါဟာ လက်တွေ့ဘဝထက် ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပဲ.. စိတ်တွေနဲ့ ဖြစ်တည်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေပဲ.. သေချာတယ် ဒါဟာ မေတ္တာစစ်စစ်တွေ. သမီးပျော်ရွှင်လိုက်တော့.. သူတို့တွေ ယူဆောင်လာတဲ့ ရင်ထဲက မေတ္တာတွေ.. ရင်ထဲက လက်ဆောင်တွေ.. ရင်ထဲက ဆုတောင်းသံတွေနဲ့ သမီးရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးကို ရင်ခုန်ကြည်နူးစွာ ကျင်းပလိုက်တော့..
ဒီအရုပ်ကလေးက ဦးဦးညိုး (မောင်မျိုး) ရဲ့ လက်ဆောင်
အပေါ်ဆုံးက “ပြူးပြူးကြီး ကြိုဆိုနေမှာပါ” ဆိုတဲ့ ပုံလေးက ချစ်မိတ်ဆွေကြီး ကိုပါဂနာ ပို့ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပါ..း)
ကလေးလေး၏ မွေးနေ့ပွဲလေးကို ပါဝင်ကူညီပေးကြသော၊ တက်ရောက်လာကြသော၊ ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ရင်ထဲကနေ နှစ်နှစ်ကာကာကြီး ပြောလိုက်ပါတယ်..။
လိုလိုမယ်မယ် မွေးနေ့ကိတ် လေးလာပို့ပါတယ်..
ကိုယ် ကတော့ မွေးနေ့တစ်ခါ ရောက်တိုင်း
ကျမ်းကျမ်း မာမာနဲ့ နွေးထွေးတဲ့
သား “တစ်ရာ” မြေး “တစ်ကျိတ်” နဲ့
အိုမင်းကုန်းကွ ရွတ်တွတဲ့ အထိ ရိုးမြေကျ
(ကိုရင်.ခင်လေး နဲ့ ကလေးလေး)
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. ဟတ်ပီး ဘတ်ဒေး.. ကလေးလေးရေ...
ဦးတော့ ပျော်တယ်ကွ... ဟား..ဟားးး
ကလေးလေးကျန်းမာပျော်ရွှင်လို့.. ဖြူစင်သူလေး အဖြစ်.. ဘ၀လမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ကွယ်... :)
မွေးနေ့မှာ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေ ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်ရစေကြောင်း မွေးနေ့ဆန္ဒမွန် ပြုလိုက်တယ်နော် ....
စားစရာတွေလည်း အားပါးတရစားပြီးသကာလ ပါဆယ်လည်း အားမနာတမ်း ထုပ်သွားနော့ ....
ကလေးလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာဘာ လက်ဆောင်၊ဘာကဗျာ၊ဘာစာမှ မပေးနိုင်ပေမဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင်၊ကျန်းမာပြီး၊ အသက်ရာကျော် နေရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော်
happy birthday....... kalaylay yae
happy birthday to............ you.........
့HAPPY BIRTHDAY ပါ
မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာဆီသို့ ...........
နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်မြောက်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံလို့ ဘ၀နေ့ရက်တွေမှာ နေခြည်ဖြာ ရွှေရောင်လွှမ်း ကံကောင်းခြင်းနဲ့ အလိုပြည့်လို့ ချစ်သောတူမလေး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေကွယ်။
ဘာပြောရမလဲ .. ဘာမှမပြောတတ်ဘူး ..
အားလုံး အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ ...
ကိုရင် နဲ့ မခင်လေး လည်း အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ ..
ကျုပ်က ဆုမပေးတတ်ဘူးဗျ ..
သူများပေးတဲ့ ဆုပဲယူတတ်တာ :D
ကဲ .. ကလေးလေး ..
ချစ်သူ ခင်သူ အားလုံးကပေးတဲ့ ဆုတွေ
မွေးနေ့အမှီပြေးလာတာ။ ၀ါးး စားစရာတွေ စုံလင်နေတာပဲ။ တထိုင်ထဲနဲ့ စားလိုက်တာ ဗိုက်လေးသွားပီ.. အဟဲ
ထရေးရေးရေ... မွေးနေ့ယက်ချောင် ယူရာဒယ်နော်... ရော့...
လှပတဲ့ အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
အမြဲတမ်း စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဟိုက်...... စောသေးတယ်မှတ်လို့ အေးအေးဆေးဆေး လုပ်နေတာ..... ပွဲက ဘယ်အချိန်ကတည်းက စနေတယ်မသိ........ တော်တော်တောင် နောက်ကျနေပြီ။
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို သူငယ်ချင်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘ၀ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း မုန့်တွေကို စားရုံနဲ့ အားမရလို့ ဂျိုင့်ဆွဲသွား၏။ မွေးနေ့လက်ဆောင်ကတော့.... ဟီ..ဟိ...... ဘိုင်ပြတ်နေလို့......နောင်များမှပဲ......
Happy Birthday Little One!!!!!
ကလေးလေးရဲ့ မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်တရာတိုင်အောင်
ဦးနော် မေခင်တို့ နဲ့ တူတူ
စိတ်၏်ကျမ်းမာခြင်း ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်းတို့ နဲ့ အတူ
ဘဝခရီးကိုပျော်ရွှင်စွာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အပူအပင်ကင်းစွာနဲ့ 
နောင်နှစ်တွေမှာ လဲ ဒီလိုပဲ ဆထက်တပိုးမွေးနေ့ လေးကို ကျင်းပနိုင်ပါစေ..
မုန့် တွေကိုလဲ အများကြီးကူးထားပေးနိုင် (အဲ) ချကျွေးနိုင်ပါစေလို့ ...
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ကလေးလေး ရေ၊၊ ဟက်ပီးဘဒ်ဒေးပါ ၊၊
လက်ဆောင်တွေ အများကြီး ရစေဗျား ၊၊ ဟုတ်ပီလား ၊၊
တိုက်တိုက်ဆိုင် ဆိုင် မွေး နေ့ ကျမှဒီ ကိုရောက်ဖူး ပါတယ်..။
HAPPY BIRTHDAY! ပါ..။
March 15, 2009 6:50 AM
Nice Birthday Ceremony !!
We all can feel the love of family and friends!!
isn't it ?? Wishing you to
get healthy and wonderful life till the end
of ur life !!
ကလေးလေးဆို.... အခုတော့ ၂၃ နှစ် ဆိုပါလား။ အဲဒါဆို ကလေးကြီးဗျ။ ကလေးလေး မဟုတ်တော့ဘူး။ အဟား...
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါစေဗျာ။
ပျော်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ... ယနေ့မှစ၍ ကလေးလေး ပျော်ရွှင်မှု နေ့ရက်တွေပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ :)
ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ဗျာ မဖိတ် လဲ လာရမှာ ပါ ခလေးလေး မွေးနေ့ အတွက် စကား လက် ဆောင်က ဘ၀တလျှောက်လုံး ငြိမ်းအေး ချမ်းသာတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူဖြစ်ပါစေ။။
အင်းးးးးးးးးကလေးလေးရဲ့ ၂၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည်.....
အင်းးးးးးး နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ တိုင်အောင်... အင်းးးးးး ကလေးလေးချစ်တဲ့သူတွေနဲ့..... အင်းးးးးးးးးး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့......... အင်းးးးးး အမြဲတူတူနေရပါစေ..... အင်းးးးးး မုန့်တွေလည်းစားသွားပါတယ်.... (ကလေးလေး၏အသံဖြင့်ဖတ်ပါ။)
နှစ်ဆယ့်သုံးမှသည် တစ်သက်လုံး အရက်ပုံး... အဲ... ဆက်ပြုံးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း တောင်းဆု ပြုပါတယ်ဗျို့။
စိတ်နဲ့ကျင်းပလိုက်တဲ့ ကလေးလေးရဲ့၂၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို စိတ်ရော
ကိုယ်ပါတက်ရောက်ပြီး ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ကလေးလေးရေ. ၂၃နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာထိတိုင်
သာယာဖြောင့်ဖြူးသော ဘဝခရီးကို ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်း
ကဗျာလက်ဆောင်မပေးနိူင်ပေမယ့် စိတ်ရဲ့လက်ဆောင်ကို ကလေးလေးရဲ့အနားမှာ
ဧရာ သီတာ ရေချမ်း ရေစင် တို့ မွေးနေ့ပွဲလာပါသည်။
မသီတာတို့ကတော့ မီးခိုးတိတ်လုပ်လာတာ ဟုတ်ရပါဘူးနော်...ကလေးတွေပါ ခေါ်လာတာ.. ကလေးလေး ပိုပျော်အောင်လို့ပါနော်
ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် အမြဲလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
ဘူဖေးစား မုန့်တွေစား ဖျော်ရည်သောက်ပြီး ပြန်သွားပါပြီ။
ကိုရင်နော်နှင့် မခင်လေး တို့ကို လည်း မွေးနေ့ပွဲဖိတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အိပ်ရာထနောက်ကျလို့ လာတာနောက်ကျသွားတယ်... :P
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေး ကလေးလေးရေ
၂၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကစလို့ ညီမလေးရဲ့ နေ့သစ်တိုင်း ပျော်ရွှင်လှပနေပါစေနော်...
ဒီဘလော့ဂ်ကို အမှတ်တမဲ့ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကလေးလေးရဲ့ မွေးနေ့နဲ့ကြုံဆုံလိုက်ရတယ်။ မဖိတ်ထားပေမယ့် အများနဲ့နည်းတူ ၀င်ရောက်ပျော်ရွှင်သွားပါတယ်နော်.... ကလေးလေးရဲ့ နေ့ရက်တွေတိုင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ မွေးနေ့ရှင်လေး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့လို့ လိုအင်ဆန္ဒ တစ်လုံးတစ်ဝ ပြည့်စုံပါစေနော်..
ကလေးလေး အမြဲပျော်ပါစေ.. ဒါနဲ့ဘာလူမျိုးလဲမသိ.. အသံ ၀ဲသလိုပဲ... မုန့် တွေကို စိတ်နဲ့ စားလိုက်တယ်.။
happy birthday ကလေးလေး.............
အခြားလူများအားလုံး ပို့သတဲ့မေတ္တာများ သိမ်းထားနိုင်ပါစေဗျာ။
အချိန်တွေ ဘယ်လောက်မြန်မြန် တနှစ်ထက်တနှစ် ကျမ်းမာစွာ ကြီးပြင်နေဖို့... စိတ်ထဲက ပြောမိ အင်း...ဆုတေင်းပေးမိပါသည်။
ကလေးလေးရေ happy birthday နော်..နည်းနည်းတောင် နောက်ကျသွားတယ်။ ခုမှနိုးလို့..နိုးနိုးချင်း လာတာ။ အ၀စားသွားတယ် ဟဲဟဲ။ ကလေးလေးရဲ့ ၂၃နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှ နောက် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀တိုင်အောင် ချစ်သူခင်သူတို့နှင့် ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေရှင်။
အရမ်းခမ်းနားပြီး အရမ်းလှတာပဲ.. ဦးနော်နဲ့ တီငယ် အလွန်တော်၏... နာလိုတောင်ဖစ်ချင်လာဘီ... မမရေ.. ပျော်ရွှင်ပါစေဗျို့..
အချိုတွေများပြီး ဆီးချိုဖစ်မှာတောင်ကြောက်ရရဲ့... :P
မမမွေးနေ့ဆိုတော့ ပရိုမိုးရှင်းကာလအနေနဲ့ တားငယ်လေး အော်ချင်သလောက်အော်.. ရေးချင်သလောက်ရေးမယ်ဗျို့.. :D
ပျော်၏ ပျော်၏ မမလည်းပျော်ပါစေ..
မွေးနေ့ပွဲက စည်စည်ကားကားနဲ့ ပျော်စရာပဲ
ကလေးလေးလဲ မွေးနေ့မှစ၍ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရင်းနဲ့ စာတွေ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ
တော်တီးတီးတော် .. ဦးနော်! ^_^
happy birthday ကလေးလေး :D
ကလေးလေး ရေ ၂၃နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
ကလေးလေးရဲ့ ၂၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွာ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနေနိုင်ပါစေနော်။ မုန့်တွေလည်းအများကြီးစားသွားတယ်နော်။
ဒီမှာ အခုမှ ၁၅ရက်နေ့ ရောက်တာ။ လာတော့ တော်တော်တောင် နောက်ကျနေပြီ။ သမီး ကလေးလေးရေ စိတ်ရော ကိုယ်ရော ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ နှစ် ၁၀၀ တိုင်ပါစေနော်။
မုန့်တွေလဲ စုံလို့။ အပြတ်တီး သွားပြီ။
တ၀ကြီးစားသွားပါတယ် .. ပျော်၇ွှင်စရာမွေးနေ့ပွဲလေးဖြစ်ပါစေ .. ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေနော် ..း) ချစ်ခင်စွာဖြင့်း)
ပထမဆုံးရောက်ဖူးတဲ့အချိန်မှာ မွေးနေ့ပွဲနဲ့ ကြုံနေတယ်... ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ... နောက်ကျမှ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးလို့ရပါတယ်နော... :D
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မုန့်ချိုချို လှလှ ၀၀ မ၀၀ စားသွားတယ်... ^-^
နောင် နှစ်များမှာလည်း ဤကဲ့သို့ မွေးနေ့ပွဲလေး ဆက်လက် ကျင်းပနိုင်ပါစေလို့....ဆုတောင်းပါတယ်။
happy birthday ပါဗျာ...
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ :)
မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်..
နောက်လည်း များများကျွေးနိုင်ပါစေလို့ .. :P
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ... ဘဝမှာ အောင်မြင်ပါစေ...
Happy Birth Day par ကလေး လေးရေ... :)
ဒီမွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းလေးနဲ့အတူ ထာဝရပျော်ရွှင်ငြိမ်းအေးပါစေဗျာ လိုရာဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေ မုန့်တွေလည်း စားသွားပါတယ်
မြင်ရတာ ထပ်တူပါပဲ စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါတယ် ဒီမိသားစုလေး
ထာဝရပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ် ကောင်းသောနေ့ပါဗျာ :)
အလုပ်တွေ များနေတာနဲ့ အလည်လာ နောက်ကျသွားတယ် ကလေးလေး ရေ တောင်းပန်ပါတယ်နော့် ကလေးလေး မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်၏ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ တူတူ အသက်ထက်ဆုံး နေနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဗျ
ကလေးလေးရေ happy birthday နော်..နည်းနည်းတောင် နောက်ကျသွားတယ်။
စားစရာတွေ စုံလင်နေတာပဲ။ တထိုင်ထဲနဲ့ စားလိုက်တာ ဗိုက်လေးသွားပီ.. အဟဲ
ဟား....... ဒီနေ့ ကလေးလေးမွေးနေ့လား...... မသိလိုက်ဘူး။ မရောက်တာကြာလို့လာလည်တာ..... :)
မွေးနေ့မှစ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ..... မွေးနေ့ပွဲကခမ်းနားလိုက်တာ မသိလိုက်လို့ လက်ဆောင်လည်းမပါလာရဘူး။ အားနာနာနဲ့ မုန့်တွေပဲ စားသွားတော့တယ်.... အဟီးး...
ခုမှ သိလို့ နောက်ကျသွားတယ်။
ဧည့်သည်တွေတောင် ပြန်ကုန်ကြပြီထင်ပါရဲ့ ...
မုန့်တွေလည်း သိပ် မကျန်တော့ဘူး ...
ကလေးလေးအတွက် ဆုတောင်းတွေပဲ ထားခဲ့တော့မယ်နော် ... ။
၂၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှသည် ...
ကောင်းမှု မင်္ဂလာအဖြာဖြာ ပြည့်စုံပါစေကြောင်း
ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် နော် ... ။
ဒီနာမည်တွဲကြီးကို တွေ့ဖူးတာကြာပြီ။ အခုပထမဆုံးလာလည်သလို ၊ ကလေးလေးအတွက်လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။ လောကဓံကို လန်ကဒေါဟေ့ ဆိုပြီး လှောင်နိုင်တဲ့ ၊ ဘာမထီ အာဇာနည် လူသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါစေဗျာ။ ဖြစ်အောင်လဲ ကြိုးစားပေါ့နော။ မွေးရက် ၁၅ ဆိုတော့ကာ လူချစ်လူခင်လဲများသကိုးဗျ။
ကလေးလေး... Happy Birthday! ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ... အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အရမ်းခမ်းနားတဲ့ ကလေးလေး ရဲ့မွေးနေ့ ပွဲလေးပဲဗျာ....
လက်ဆောင်မပဲ လာရောက်စား သောက်သွားပါတယ်....:P
ကလေးလေး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာ လိုသောဆု တောင်းတိုင်း ပြည့်စုံပါစေ ဗျာ။
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေလေး ဖြစ်ပါစေ ။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ မွေးနေ့ ပွဲလေး ကျင်းပနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။း)
ွှအရမ်း ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့လေးပဲနော်
(အားကျလိုက်တာ ဆိုတဲ့ စကားလေးတော့ မပြောပါဘူး)
ဟက်ပီးဘက်ဒေး ညီမလေးရေ့ လူတွေအများကြီးပဲ ပျော်စရာကြီး ။
ခမ်းနားပြီး ပျော်စရာအတိနဲ့ မွေးနေ့
အစာစားဖို့ မပြောနဲ့ ကော်မန့်ရေးဖို့တောင်
မနဲ တန်းစီခဲ့ရတယ်...း)
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေးပါ.. နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ
၂၃ နှစ်အရွယ်အတိုင်း နုပျိုတက်ကြွနေပါစေ....
Happy birthday ကလေးလေး ....Be Happy .. Healthy... & Peaceful ... Forever!!!
ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးဖြစ်ပါစေ ..
မွေးနေ့လေးမှ စလို့ ညီမငယ်ရဲ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး
ဘ၀နဲ့ဆန္ဒ ထာဝရထပ်တူ ကျနိုင်ပါစေလို့ ..
မုန့်တွေလဲစားသွာပါတယ်...ဖိတ်တဲ့ အတွက်လဲကျေးဂျုးပါနော်... ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့၍ စာတွေ များကြီး ရေးနိုင်ပါစေ... :)
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ..
ဘဝတလျှောက်လုံး ဖြစ်ချင်သော လိုချင်သော တောင့်တသော အရာအားလုံးကို စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတာနှင့်အမျှ ပြည့်ဝနိုင်ပါစေ..
မွေးနေ့မှစ၍ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
မွေးနေ့ပွဲလာတာများ နောက်ကျသွားသလားမသိဘူး... နက်ပိတ်နေတော့ ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်နေဘူး...။ မုန့်တွေအများကြီးလာစားသွားတယ်...။
မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် လိုအင်ဆန္ဒပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
ကလေးလေးရေ့့့ 
တီတီလု သမီးလေးဆီ မနေ့ကတည်းက ကြိုးစားပြီး လာနေတာ။
ကွန်နက်က သိပ်မကောင်းလို့ နောက်ကျသွားတယ်နော်။
မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ တိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါနော်
အကုန်ပြန်သွားပီထင်ပါ့... နောက်ဆုံးမှရောက်လာတယ် ကလေးလေးရေ...
ကလေးလေးရေ။ ခုမှ ကော်နတ်ရှင်ကောင်းလို့ ။ နောက်ဆုံးပိတ် ဆုတောင်းတွေကို အိတ်နဲ့လွယ်လာတယ်နော်။ ;-)
ဟင်..... ကလေးဆို ဘယ်လိုလုပ် ၂၃ဖြစ်နေတာတုန်း ၁၃ဟုတ်ဖူးလာ ပြင်လိုက်ဦးလေမှားရေးထားတာကို...ဟိဟိ
Happy Birthday ပါကလေးလေးရေ
HAPPY BIRTHDAY ပါ ကလေးလေးရေ..
တီတီဝါ စောစောလာရက်နဲ့ နက်မကောင်းလို့ နောက်ဆုံး
မှဆုတောင်းရတယ်.. နိုပြီးပြန်သွားပြီ.း(
ဦးဦး ၊ဒေါ်ဒေါ် ၊ကိုကို ၊မမတွေ အများကြီးပဲ..
တီတီဝါကို စိတ်မဆိုးနဲ့နော်.. တွေ့ပုချိ
နောက်ကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ကျတယ်ဆိုတာ ဘာနဲ့တိုင်းမလဲနော..
ကိုရင်နဲ့မခင်လေးတို့ရဲ့ ကလေးလေး ၂၃နှစ်တဲ့။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၂၄ကို ဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်စေသားပေါ့ဗျာ။
မွေးနေ့ကိုရောက်တာ အရမ်းနောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်... နောက်ဆုံးရောက်တဲ့သူတောင် ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါတယ်...း) ကိုရင်နော်နဲ့ ခင်လေးငယ်တို့ရဲ့ ကလေးလေး မွေးနေ့ကနေ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ဘ၀ကို အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...
i am too late, so sorry
အခုလို ၀ိုင်းချစ်ခံရ မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေအများကြီးရနဲ့
ကလေးလေးရဲ့ မွေးနေ့ တအားစည်ခဲ့ပါလားနော် :)